Ọ dịghị onye ịtụkwasị obi? Ozi na-ezighi ezi banyere COVID-19 na ntuli aka na-abawanye na Latin America na Caribbean · Global Voices n’asusu Igbo
Ozi adịgboroja na-gbasa site na Mexico ruo Venezuela na Peru
Translation posted 13 October 2021 12:26 GMT
Read this post in Italiano, Malagasy, русский, Español, عربي, English
Ihe atụ nke Pch.vector na Freepik, n'okpuru ikikere Freepik.
Nke a bụ ihe akụkọ sitere na onye nchịkọta akụkọ IFEX's Paula Martins, “Ihe ị kwesịrị ịma ugbu a: Ọnọdụ nnwere onwe ikwu okwu na ozi na Latin America na Caribbean,” Global Voices bipụtara ma dezie ya.
Ọ bụ ezie na Latin Amerịka na Caribbean na-agagharị, n'agbanyeghị na ha ji nwayọ, iji bụso ọrịa COVID-19 ọgụ, na atụmanya nke ‘ịlaghachi na nkịtị’, ọgba aghara akụ na ụba na ndọrọ ndọrọ ọchịchị na-amalite. Karịsịa, enweghị ntụkwasị obi na gọọmentị na-ebute ozi na-ezighi ezi banyere COVID-19 na Latin Amerịka, ọ bụ ndị UNESCO kwuru nke a.
Mpaghara a ahụla mbelata n'ọganihu akụkọ ihe mere eme ya n'ịghọta ikike ozi – n'agbanyeghị nkwekọrịta mpaghara ọhụrụ dị mkpa na mpaghara ahụ. Ụkọ ozi a pụrụ ịtụkwasị obi banyere okwu ndị dị oke mkpa, gụnyere ọgụ megide COVID-19, na-ọnọdụ n'adịghị ka ọtụtụ mgbasa ozi na-ezighi ezi nke mebiworo mpaghara ahụ, ọ bụghị naanị n'ihe metụtara ọrịa na ọgwụgwọ ya kamakwa gbasara okwu ndọrọ ndọrọ ọchịchị. Ọtụtụ mkpọsa ndọrọ ndọrọ ọchịchị anabatala iji bots, ọkachasị, n'ọgụ maka echiche ọha na oghere dijitalụ.
Nke ahụ bụ ihe mere na Venezuela. N'ọnwa Disemba puku abụọ na ịrị abụọ, mgbasa ozi gbasara nsogbu ntuli aka na usoro ntuli aka ebe niile – ọbụlagodi ndị otu gọọmentị. Dịka ọmụmaatụ, National Electoral Council nke mba ahụ kwuru site na Twitter na ndị na -ahụ maka ntuli aka nke mba ụwa, gụnyere site na United States, mana ozi US na Organisation of States (OAS) gọnarịrị ozi a.
Na Mexico, “akụkọ adịgboroja gbasara ndị na -eme ntuli aka, ndị otu na ụlọ ọrụ gbasara nke ọma na netwọkụ mmekọrịta tupu ntuli aka. Dị ka ndị nyocha si kwuo, oghere arụmụka ndọrọ ndọrọ ọchịchị miri emi mepere ohere maka mgbasa ozi gbasara ndị na-eme ntuli aka na usoro ntuli aka. Ndị ọkachamara chọpụtara na mkpọsa mgbasa ozi dị mgbagwoju anya, ebe ndị isi ihe nkiri anọ chịkọtara atụmatụ na sosal midia: “ndị nna ememme,” ndị na -ewebata akụkọ ahụ; akaụntụ akpaaka (ma ọ bụ bots) na -abawanye ya; “trolls” na -awakpo ebumnuche ndị akọwapụtara; na “ndị na -akwado,” ndị nkịtị na -eme usoro a, site na imepụtagharị ọdịnaya n'echeghị echiche.
Na nhoputa ntuli aka nke Juun nke Peru, ozi na -ezighi ezi kesara na ịntanetị maka usoro ntuli aka; ọtụtụ n'ime ya, dị ka ana -ahụ na mba ndị ọzọ, na -anwa imebi ntụkwasị obi na ndị isi ntuli aka. Na mgbakwunye na ozi ụgha, ejiri ezigbo ozi mee ihe maka ebumnuche ndọrọ ndọrọ ọchịchị. Dịka ọmụmaatụ, akụkọ gbasara ndepụta ndị ntuli aka ịtụ vootu, na -egosi na ha gụnyere aha ndị nwụrụ anwụ, mana ha hapụrụ ozi gbasara oge na usoro iji dozie ma mechaa ndepụta ahụ.
Na nzaghachi n'okwu gbasara iguzosi ike n'ezi ihe ọmụma nke Peru, e mepụtara netwọkụ nyocha ọhụrụ Peruvian na Jenụwarị afọ puku abụọ na ịrị abụọ na otụ iji luso ozi ụgha n'oge mkpọsa ntuli aka. Akpọrọ atụmatụ a Ama Llulla (”aghala ụgha ” na Quechua), ebumnuche ya bụ ịnye ntụgharị nke ozi enyochala n'asụsụ ụmụ amaala na iwepu ihe mgbochi na -egbochi itinye aka na ndọrọ ndọrọ ọchịchị nke ndị otu adịghị ike.
Nnwere onwe ndị nta akụkọ enwewokwa nsogbu, na -egbochi ịnweta ozi a pụrụ ịdabere na ya. Ka ngagharị iwe bidoro na mpaghara niile n'ihi enweghị afọ ojuju maka ọrụ gọọmentị na-ebuso ọrịa a ọgụ, yana nsogbu dịtere aka tupu COVID-19, a hụkwara ihe ike nke ndị uwe ojii butere megide ndị ngagharị iwe megide mgbasa ozi na-ekpuchi ihe omume ndị a. Site na ihe FLIP kwụrụ, edepụtara mwakpo nari abụọ na ịrị ịse na asaa megide ndị nta akụkọ n'oge ha na -akọ banyere ngagharị iwe a.
Nkọwapụta juru ebe niile n'oge ngagharị iwe ndị a, dịka n'oge ngosipụta na Colombia. Isi mmalite mpaghara kwuru na ọtụtụ narị vidiyo, ndekọ ọdịyo, na onyonyo na ekesa n'ịntanetị banyere ogbugbu mba Colombia, ọtụtụ na -agha ụgha ma ọ bụ ozi ewepụtara na gburugburu, na -emetụta akụkọ gbasara ihe na -eme n'okporo ụzọ.
Ime ihe ike na -emekwa na mpụga nke ngosipụta ọha. Okwu mkparị na mwakpo ọnụ megide ndị nta akụkọ na -esiwanye n'aka ndị isi ọha. Ọbụlagodi ndị nta akụkọ anọ egburu kemgbe Jenụwarị puku abụọ na ịrị abụọ na otụ na Latin America.
Ọ bụ ezie na ntaram ahụhụ maka ikpe ime ihe ike megide ndị nta akụkọ na -abụkarị njirimara mpaghara, anyị ahụla ụfọdụ ọganihu, agbanyeghị, n'okwu atọ dị mkpa gbasara ime ihe ike megide ndị nta akụkọ na ndị na-agbachitere ikike mmadụ: Berta Cáceres (Honduras), Jineth Bedoya (Colombia), na Alex Silveira (Brazil). Na mpaghara amaara maka ntaramahụhụ n'okwu ndị yiri ya, a ga -emerịrị ozi ọma.
Nke a bụ ihe si n'ihe ị kwesịrị ịma ugbu a: Ọnọdụ nnwere onwe ikwu okwu na ozi si na Latin America na Caribbean. Usoro ntụpọ mpaghara IFEX na -enye ọgwụ mgbochi maka oke ozi ndị mmadụ na -eju mmiri kwa ụbọchị. Akụkụ nke ọ bụla na -enyocha ọnọdụ mpaghara na nso nso a iji mee ka ndị na -agụ akwụkwọ nwee ike itinye aka nke ukwuu na nnwere onwe ikwu okwu yana okwu gbasara ozi. Ị nwere ike ịhụ ha niile ebe a.